China China HRC55 Abenzi beMill Mill abavelisi kunye nabathengisi | Mingtaishun
Ipakethi enye yeplastiki enye, ishumi leqela ngalinye kunye nebhokisi engaphandle
2.Put iimpahla ezivalelwe ngephepha lomoya kwibhokisi.
3.Enye iphakheji yamkelwe ngokwemfuneko yomthengi kwi-MTS Tungsten Steel Carbide End Mills.
I-MTS-3 * 8 * 3 * 50 3 8 3 50 4 2
I-MTS-3 * 12 * 3 * 75 3 12 3 75 4 2
I-MTS-3 * 15 * 3 * 100 3 15 3 100 4 2
I-MTS-1 * 3 * 4 * 50 1 3 4 50 4 1
I-MTS-1.5 * 4 * 4 * 50 1.5 4 4 50 4 1
I-MTS-2 * 5 * 4 * 50 2 5 4 50 4 1
I-MTS-2.5 * 7 * 4 * 50 2.5 7 4 50 4 1
I-MTS-3 * 8 * 4 * 50 3 8 4 50 4 1
I-MTS-3.5 * 10 * 4 * 50 3.5 10 4 50 4 1
I-MTS-4 * 10 * 4 * 50 4 10 4 50 4 2
I-MTS-4 * 16 * 4 * 75 4 16 4 75 4 2
I-MTS-4 * 20 * 4 * 100 4 20 4 100 4 2
I-MTS-5 * 13 * 5 * 50 5 13 5 50 4 2
I-MTS-5 * 20 * 5 * 75 5 20 5 75 4 2
I-MTS-5 * 25 * 5 * 100 5 25 5 100 4 2
I-MTS-2.5 * 7 * 6 * 50 2.5 7 6 50 4 1
I-MTS-3 * 8 * 6 * 50 3 8 6 50 4 1
I-MTS-3.5 * 10 * 6 * 50 3.5 10 6 50 4 1
I-MTS-4 * 10 * 6 * 50 4 10 6 50 4 1
I-MTS-4.5 * 12 * 6 * 50 4.5 12 6 50 4 1
I-MTS-5 * 13 * 6 * 50 5 13 6 50 4 1
I-MTS-6 * 15 * 6 * 50 6 15 6 50 4 2
I-MTS-6 * 25 * 6 * 75 6 25 6 75 4 2
I-MTS-6 * 30 * 6 * 100 6 30 6 100 4 2
I-MTS-6 * 40 * 6 * 150 6 40 6 150 4 2
I-MTS-7 * 18 * 8 * 60 7 18 8 60 4 1
I-MTS-8 * 20 * 8 * 60 8 20 8 60 4 2
I-MTS-8 * 28 * 8 * 75 8 28 8 75 4 2
I-MTS-8 * 35 * 8 * 100 8 35 8 100 4 2
I-MTS-8 * 50 * 8 * 150 8 50 8 150 4 2
I-MTS-9 * 23 * 10 * 75 9 23 10 75 4 1
I-MTS-10 * 25 * 10 * 75 10 25 10 75 4 2
I-MTS-10 * 40 * 10 * 100 10 40 10 100 4 2
I-MTS-10 * 50 * 10 * 150 10 50 10 150 4 2
I-MTS-11 * 28 * 12 * 75 11 28 12 75 4 1
I-MTS-12 * 30 * 12 * 75 12 30 12 75 4 2
I-MTS-12 * 45 * 12 * 100 12 45 12 100 4 2
I-MTS-12 * 60 * 12 * 150 12 60 12 150 4 2
I-MTS-14 * 35 * 14 * 80 14 35 14 80 4 2
I-MTS-14 * 45 * 14 * 100 14 45 14 100 4 2
I-MTS-14 * 60 * 14 * 150 14 60 14 150 4 2
I-MTS-16 * 45 * 16 * 100 16 45 16 100 4 2
I-MTS-16 * 60 * 16 * 150 16 60 16 150 4 2
I-MTS-18 * 45 * 18 * 100 18 45 18 100 4 2
I-MTS-18 * 70 * 18 * 150 18 70 18 150 4 2
I-MTS-20 * 45 * 20 * 100 20 45 20 100 4 2
I-MTS-20 * 70 * 20 * 150 20 70 20 150 4 2
Ngenkonzo ephezulu neyodwa, siphuhliswe kakuhle kunye nabathengi bethu. Ubungcali nokwazi kuqinisekisa ukuba sisoloko sikonwabela ukuthembela kubathengi bethu kwimisebenzi yethu yeshishini. "Umgangatho", "ukunyaniseka" kunye "nenkonzo" ngumgaqo wethu. Ukunyaniseka nokuzibophelela kwethu kuhlala ngentlonipho kwinkonzo yakho. Nxibelelana nathi namhlanje Ngolwazi oluthe kratya, nxibelelana nathi ngoku.
Inkampani yethu imema ngokufudumeleyo abathengi basekhaya nabaphesheya ukuba beze kuthetha-thethana nathi kwishishini. Masidibanise izandla ukwenza ingomso eliqaqambileyo! Sijonge ukusebenzisana nawe ngokunyanisekileyo ukufezekisa imeko yokuphumelela. Siyathembisa ukuzama konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni ophezulu kunye neenkonzo ezifanelekileyo.
Imveliso yethu ithunyelwe kumazwe angaphezu kwama-30 nakwimimandla njengomthombo wesandla sokuqala ngexabiso eliphantsi. Sibamkela ngokunyanisekileyo abathengi abasuka ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba beze kuthethathethana neshishini nathi.
Sizimisele ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho kunye nokusombulula naziphi na iingxaki zobuchwephesha onokuthi uhlangane nazo nezinto zakho zorhwebo. Iimveliso zethu ezizodwa kunye nolwazi olukhulu lwetekhnoloji lusenza ukuba sikhethe ukhetho kubathengi bethu.
Egqithileyo I-55 ye-HRC yokuphela kwesikwere-2 Flute
Okulandelayo: I-55 ye-HRC yokuphela kwesikwere-4 ifluti D4mm